ကိုယ့်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုရှိအောင် လုပ်ရမယ့် အချက်များ – Shwe Naung
ကိုယ့်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုရှိအောင် လုပ်ရမယ့် အချက်များ
shwelikegu | August 29, 2021 | Knowledge, Lifestyle & Fitness | No Comments
ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပျော်နေတာကို မြင်ရင် ကြည်နူးမိသလို ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘတွေနဲ့ အဲ့ဒီလို ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ တခါတလေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘတွေနဲ့ မရင်းနှီးတာ၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး မဖြစ်တာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေတွေကနေ ကျော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိဘတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘာတွေ လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
မေမေ ဖေဖေတို့နဲ့ ရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မကြာမကြာ တွေ့ဆုံတာမျိုး လုပ်ပါ။ အတူတူ ဆုံတဲ့အချိန်တွေ များလာတယ်ဆိုရင် ရင်းနှီးဖို့ အခွင့်အရေး ပိုရလာမှာပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ရင်းနှီးလာမှာပါ။ စကားများများ မပြောဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် ခဏခဏ တွေ့နေရင်တော့ ရင်းနှီးလာမှာပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုတာ သိရင် သူတို့ဘက်ကလည်း အဲဒီခံစားချက်ကို နားလည်မှာပါ။
ခဏခဏ မတွေ့ဖြစ်ဘူး၊ တနယ်စီ ခြားနေတယ်ဆိုရင်တောင် မိဘတွေနဲ့ နှလုံးသားတွေ နီးနေရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ တခြားမိသားစုတွေလည်း မတွေ့ဖြစ်ကျရင်တောင် အဆက်အသွယ် ရှိနေပြီး ရင်းနှီးနေကြတာပဲလေ။ ဒီတော့ မတွေ့ဖြစ်ကြရင်တောင် မိဘတွေဆီ ဖုန်းဆက်တာမျိုး လုပ်ပါ။ စာပို့တာ၊ Video Call ပြောတာမျိုးတွေ လုပ်ပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာက အဆက်အသွယ် ရှိဖို့က မခက်တော့ဘူးလေနော်။ အစပိုင်းမှာ စကားပြောရင် နည်းနည်း အဆင်မပြေနေသလိုလို၊ စိမ်းနေသလိုလို ဖြစ်တတ်ပေမယ့် အဆက်အသွယ် မပြတ်ဖို့တော့ ကြိုးစားရမှာပါ။
မေမေဖေဖေတို့နဲ့ ရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့မှာ ဘာအခက်အခဲတွေ ရှိနေလဲ၊ ဘာတွေအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာတွေ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကူညီနိုင်တာ၊ အားပေးနိုင်တာတွေ ရှိရင် အားပေးပါ။ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးတာမျိုး လုပ်ပါ။ ဒါက ကိုယ်နဲ့ မေမေ ဖေဖေတို့ကြားမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်စေမှာပါ။
လက်ဆောင် သေးသေးဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ပို့ပေးပါ။ ဒါက ရင်းနှီးပြီး နွေးထွေးတဲ့သဘောကို ပြသရာ ရောက်တာမို့ မိဘတွေကလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်လာမှာပါ။ သူတို့က ပေးရင်လည်း ယူပါ။
ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်းတွေလည်း ပြောပြပါ။ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ပြောပြရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်နော်။ ဒါဆိုရင်ပိုပြီး ရင်းနှီးလာမှာပါ။
မေမေ ဖေဖေတို့နဲ့ ပြန်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ ပြောပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါနော်။တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်အဆင်ပြေလာမှာပါ။
ခေတ်အဆက်ဆက် ပန်းရံဆရာတွေ ဘယ်လိုပြင်ပြင် မရတဲ့ မြသလွန်ဘုရားပေါ်က ဘီလူးရယ်နေပုံ သမိုင်းကြောင်း
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမ(Convocation Hall ) အပြင်ဘက် ကို ဆေးမသုတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
တစ်သက် နဲ့ တစ်ကိုယ် အဲ့လို အဖြစ်မျိုး ကြုံဘူး ခဲ့ရလိပ့်မယ်လို့ တွေးတောင်း မတွေးမိခဲ့ဘူးဗျာ….
အတွင်းသား အလှတရားများ ပေါ်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေပေးနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျ မိမိုက်ပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………..
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….